आध्यात्मिक ज्ञान : मृत्युसँग किन डराउने ? – रेडियो संकेत
आध्यात्मिक ज्ञान : मृत्युसँग किन डराउने ?
अध्यात्मको मुख्य ध्येय भनेको नै मृत्युपछि मुक्तिको कामना गर्नु हो । अध्यात्मले जीवनलाई एउटा संक्षिप्त कालखण्डको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको हुन्छ भने मृत्युलाई शास्वत सत्य । त्यसैले यसले जीवनमा तीब्र वैराग्यलाई नै विशेष प्राथमिकता दिने गर्दछ ।
फेरि यो जगत्मा आउन नपर्नेगरी ईश्वरको सानिध्यमा पुग्नु नै हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार मोक्ष अथवा मुक्ति हो । त्यसैले मानिसले आफ्नो जीवनकालभरमा फल प्राप्तिको आशा विना नै गरेको सत्कर्मले नै उसले मोक्ष पाउने कि नपाउने ? निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
महाभारत, श्रीमद्भागवत् गीता जस्ता हिन्दू धर्मशास्त्रहरु यस्ता अध्यात्म एवं दर्शनको सागर हुन् । जसबाट हामीले सानो अंश उठाउँदा पनि त्यो अत्यन्त जीवनोपयोगी हुने गर्दछ । महाभारतको यही मोक्षधर्म सम्बन्धी पर्वमा एक पिता र पुत्रले मृत्युबारे गरेको विवेचनलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।
राजा युधिष्ठिरले एक दिन भीष्मपितामहलाई सोधे, पितामह ! समस्त भूतहरुको संहार गर्नेवाला यो काल विस्तारै बितिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मानिसले के गर्दा ऊ कल्याणको भारी हुन सक्दछ । यो मलाई बताईदिनुहोस् ।
भीष्‍म पितामहले भने, युधिष्ठिर ! यस विषयमा ज्ञानी पुरुष पिता र पुत्रको संवादरूपलाई हाम्रो प्राचीन इतिहासले उदाहरणको रुपमा दिने गरिएको छ । तिमी त्यो उदाहरणलाई ध्यानपूर्वक सुन ।
कुन्‍तीकुमार, प्राचीनकालमा एक ब्राह्मण थिए, जो सदा वेद–शास्त्रको स्वाध्‍यायमा तल्लीन रहन्थे । उनका एक पुत्र थिए । जो गुणमा त मेधावी थिए नै, नाममा समेत मेधावी थिए । उनी मोक्ष, धर्म र अर्थमा कुशल तथा लोकतत्त्वका राम्रा ज्ञाता थिए ।
ए‍कदिन उनका पुत्रले आफ्ना स्वाध्यायपरायण पितासँग भने , ‘पिताजी ! मनुष्‍यहरुको आयु तीब्र गतिमा बित्दै गईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो जानेका धीर पुरुषले के गर्नुपर्छ ? मलाई आज यथार्थ उपायको उपदेश गरिदिनुहोस् । जसका कारण म पनि धर्मको आचरण गर्न सकुँ ।’
फेरि पिताले भने, ‘छोरा ! यो आयुको गतिलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं । यस्तो अवस्थामा द्विजहरुले सबैभन्दा पहिले ब्रह्मचर्यको व्रत पालना गर्दै सम्पूर्ण वेदहरुको अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्दछ । फेरि गृहस्थावस्थामा पितृहरुको सद्गतिको लागि सन्तानोत्पादन गर्नुपर्दछ । सोही आश्रममा विधिपूर्वक त्रिविध अग्निको स्थापना गरेर यज्ञको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ । त्यसपछि वानप्रस्थ–आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ । त्यसपछि वैराग्य सहित सन्यासाश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ ।
फेरि पुत्रले सोध्यो, ‘पिता जी ! यो लोक जब यसरी मृत्युद्वारा मारिँदै गईरहेको छ, दिन र रात सफलतापूर्वक आयुक्षय रुपमा काम गरेर वितिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं यस्तो कुरा कसरी गरिरहनु भएको छ ?’
पिताले फेरि भने, ‘छोरा ! तिमी मसँग भयभीत किन भईरहेका छौं ? मलाई एउटा कुरा बताऊ कि यो लोक कसबाट मारिँदै छ ? के कुराले यो लोकलाई घेरिरहेको छ ? यहाँ को मानिसले चाहिँ सफलतापूर्वक आफ्नो काम सम्पन्न गर्दैछ ?
पुत्रले भन्यो, ‘पिता जी ! हेर्नुहोस् यो सम्पूर्ण जगत मृत्युद्वारा नै मारिँदैछ । बुढ्यौलीले यसलाई चारैतिरबाट घेरिरहेको छ । दिन र रात नै यस्तो व्यक्ति हो जसले सफलतापूर्वक प्राणिहरुको आयु अपहरण स्वरुप आफ्नो काम गर्न व्यतित छ । यस कुरालाई तपाईं किन नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ ?’
‘यो अमोघ रात्रिहरु नित्य आउने गर्दछ र जान्छ पनि । जब म यस कुराको बारेमा परिचित छु कि मृत्युले हामीलाई क्षणभरको लागि पनि पर्खिने छैन । म उसको जालोमा फसिसकेको छु । जब एक रात बितेसँगै आयु कम हुँदै जान्छ भने ताजा पानीमा खेल्दैगरेको माछा जस्तो कसले सुख पाउन सक्छ त ?’’ छोराले फेरि थप्यो ‘‘जसरी घाँसमा चरिरहेको भेँडाको सामु अचानक बाघ आउँछ र उसलाई टिपेर लैजान्छ । त्यसरी नै अर्कै काममा व्यस्त रहेको मानिसलाई सहसा मृत्युले टिपेर लैजान्छ । यो कस्तो चलन हो ?’
त्यसको उत्तरमा पिताले भने, ‘त्यसैले म भन्दै छु, जुनसुकै कल्याणकारी कार्य हो । त्यो आज नै गर्नुपर्छ । तपाईं गर्छु भनेर राखेको कुरा त्यसै तपाईंको हातबाट नखुस्कियोस् । किनकी तपाईंको काम आधा पनि पूरा नहुँदै तपाईंलाई मृत्युले खिच्न सक्छ । त्यसैले जुन कामलाई साँझसम्म गरिसक्नुपर्ने भनिएको हुन्छ त्यो बिहान नै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
कसले जानेको हुन्छ कसको मृत्यु आज नै हुन्छ भनेर ? सम्पूर्ण जगतमा प्रभुत्व राख्नेवाला मृत्यु जब कसैलाई हराएर लैजान चाहन्छ । उसले कसैलाई पनि मृत्युको पूर्वसन्देश पठाउने गर्दैन । जसरी माझीले लुकेर गएर माछालाई जालोमा हालेको हुन्छ । त्यसरी नै मृत्युले पनि लुकेर गएर मानिसलाई टिपेर लैजान्छ । अतः युवावस्थामा नै सबैले धर्मको पालना गर्नुपर्दछ । किनकी जीवन निःसन्देह र अनित्य छ । धर्माचरण गर्नुले यस लोकमा मनुष्‍यको कीर्तिको विस्तार हुन्छ र परलोकमा समेत उसलाई सुख मिल्छ । जो मनुष्‍य मोहमा डुबेको छ त्यो मानिस नै पुत्र र स्त्रीको लागि उद्योग गर्ने गर्दछ । गर्न हुने र नहुने काम गरेर यी सबैको पालनपोषण गर्ने गर्दछ । जसरी सुतेको मृगलाई बाघले उठाएर लैजाने गर्दछ । त्यसैगरी पुत्र, परिवार एवं पशुहरुबाट सम्पन्न एवं तिनै मनलाई फसाई राख्ने मनुष्यहरुलाई एक दिन मृत्यु आएर उठाएर लैजाने गर्दछ ।
मनुष्‍य सोच्ने गर्दछन् कि यो कुरा पूरा भयो र अर्काे कुरा अधुरो नै रहने भयो । यस प्रकारको चेष्‍टाजनित सुखमा आसक्‍त भएका मानिसहरुलाई कालले आफ्नो वशमा लिने गर्दछ । मनुष्य आफ्नो खेत, पसल र घर जस्ता सामान्य विषयलाई मात्रै आफ्नो ठानेर त्यो भ्रममा फसेर बस्ने गर्दछन् । उनीहरुलाई यसरी गरेको कर्मको फल कहिले र कस्तो पाईन्छ ? भन्ने बारेमा समेत ज्ञान भएको पाईंदैन । त्यो कर्मको फल पाउनुभन्दा अघि नै कर्मासक्त मनुष्‍यलाई मृत्युले उठाएर लैजान्छ । कुनैपनि मानिस दूर्बल होस् या त बलवान् । शूरवीर होस् या त डरपोक तथा मूर्ख नै किन नहोस् । मृत्यु उसको समस्त कामनाहरु पूरा हुनुभन्दा पहिले नै उसलाई उठाएर लैजान्छ ।
कुनैपनि मानिस जन्मिएपछि अमृत र मृत्यु दुबै उसले शरीरमा नै लिएर आएको हुन्छ । मनुष्‍य मोहबाट मृत्युलाई र सत्यबाट अमृतलाई प्राप्त गर्दछ । अतः अब म हिंसाबाट दूर रहेर सत्यको खोजी गर्नुपर्दछ । काम र क्रोधलाई हृदयबाट निकालेर दुख र सुखको समान भाव राख्नुपर्दछ । तथा सबैको लागि कल्याणकारी बनाएर मृत्युको भयबाट मुक्त हुनुपर्नेछ । यज्ञमा तत्पर रहेर मन र इन्द्रियहरुलाई वशमा राखेर ब्रह्मयज्ञ (वेद–शास्त्रहरुको स्वाध्‍याय) मा लागेर मुनिवृत्तिले रहनेले मृत्युसँग डराउनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।
Previous मोवाइल बाटै पुस्तक लेखेर बिमोचन, नानी विवुको अनुक्रोश
Next नवरात्रीको छैटौं दिन आज कात्यायनी माताको पूजा
उद्योग बाणिज्य संघनवलपुर ले जारी गर्यो विभिन्न माग सहितको प्रेस विज्ञप्ति
साहित्यकार विभुको”आउन पाइन घरमा” सार्वजनिक